Abakhiqizi Bomshini Bashelelayo - Abathengisi Bomshini WamaShayina Nokwenza
2m-6m umshini oshisayo onesivinini esikhulu
Umshini oshelelayo wesivinini esikhulu wakhiwe ngomshini ongacabangi, umshini wokusika, umshini wokuphonsa umoya, umqulu ngamunye wokuqondisa nokulawula ukungezwani nokulungisa imishini. Umgomo wokusebenza unjengokulandelayo: izinto ezihlanganisiwe zefilimu ezikhiqizwe kumshini wokufafaza zingena emshinini wokusika ngokusebenzisa i-flattening roller, i-roller dischole roller, i-rolling enika amandla kanye nohlelo lokuphambuka. Ngemuva kokuthi izinto zokusetshenziswa zisikiwe, indlela yokubuyela emuva izobuyela emuva ...
2m-6m umshini oshisayo onesivinini esiphezulu
Umshini oshisayo wesivinini esiphezulu Ukuze uhlangabezane nezidingo zemakethe, sithuthukise amashele amakhulu amakhulu anjalo. Umshini oshibhile osheshisa kakhulu ungasika amamitha ayi-2 kuye kwayi-6 ububanzi wokufaka, njenge-BOPP / CPP / OPP / PET / PE / PVC njalonjalo. Izici zomshini i-Adopt Motorola servo motor kanye ne-Motorola isilawuli sokunyakaza ukunikeza isakhiwo esizinzileyo sokulawula isimo, isistimu yokusebenza kwe-inthanethi elula, futhi ingaxhunywa kwi-Intanethi Yezinto zokulawula okude Ngokusekelwe kulawulo oluphambili ...
Umshini wokusika amapayipi
Umshini oshisayo wesivinini esiphezulu Ukuze uhlangabezane nezidingo zemakethe, sithuthukise amashele amakhulu amakhulu anjalo. Umshini oshibhile osheshisa kakhulu ungasika amamitha ayi-2 kuye kwayi-6 ububanzi wokufaka, njenge-BOPP / CPP / OPP / PET / PE / PVC njalonjalo. Izici zomshini: I-Adopt Motorola servo motor kanye ne-Motorola isilawuli sokunyakaza ukunikeza isakhiwo esizinzileyo sokulawula isimo, isistimu yokusebenza kwe-inthanethi elula, futhi ingaxhunywa kwi-Intanethi Yezinto zokulawula okukude ngokusezingeni eliphakeme le-contro ...